समर्थकको खुलदुली : सुधारिएला नेपालको ओपनिङ समस्या ! पारसबाट ठुलो आश – onlinekhelkhabar.com
समर्थकको खुलदुली : सुधारिएला नेपालको ओपनिङ समस्या ! पारसबाट ठुलो आश
सलमान शाह	Posted on श्रावण ६ २०७६, सोमबार
शलमान शाह (अनलाईन खेलखबर )।। ओपनिङ् अर्थात टिमका सुरुवाती शुत्रधार जसको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ खेलको मोडलाई दिशानिर्देश गर्न तर क्रिकेटको उदयमान राष्ट नेपालले पछिल्लो समय ओपनिङ जोडीको राम्रो साथ् नपाईरहेको अबस्था छ ।
हरेक खेल हरेक प्रतियोगितामा नेपालको मुख्य केन्दित कस्ले यसपटक ओपनिङ गर्छ भन्नेमा रहेको हुन्छ । जसबाट सोमबार देखि सिगांपुरमा सुरु भएको आईसीसी टी -ट्वान्टी विश्वकप एसिया फाइनल छनोट पनि अछुतो छैन ।
यसपटक कप्तान पारस खडकाले ओपनिङ् पक्का गर्ने छन भने उनलाई साथ् कस्ले दिने छन त्यो हेर्न बाकि रहेको छ । जसमा पवन सरार्फ र विनोद भण्डारीको विकल्प रहेको छ । पूर्व तयारी अनुसार प्रतियोगिताको पहिलो कतारबिरुद्दको खेलमा पारस खडकालाई पवन र बिनोद मध्य एकको साथ रहने छ ।
पछिल्ला समय नेपालको एक मुख्य कमजोरीको रुपमा रहेको ओपनिङ् साझेदारी नै हो । यसबीचमा नेपालले ठुलो ओपनिङ साझेदारी पाएको छैन । जसको फलस्वरुप टिमले हरेक पटक नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । यसबाट हुन्छ भने हुँदैन फेरी अर्को जोडी तयार गर्न थालिन्छ फेरी त्यो जोडीले पनि राम्रो गर्न सक्दैन फेरी नयाँ जोडीलाई खोज्ने सिलशिला जारी रहन्छ ।
त्यसको पछिल्लो उदारण पारस खड्कालाई लिन सकिन्छ । नेपाली क्रिकेटको हाल सम्मको सफलतामा ठुलो योगदान गरेका पारस भने ओपनिङ गर्ने खेलाडी भित्र पर्दैनन् । चाहे त्यो घरेलु खेल होस् या अन्तराष्टिय तर कसैले प्रदर्शनले खुशी दिन नसकेपछि स्वयम् कप्तान पारसले ओपनिङको जिम्मा लिएका छन ।
केहि दिन अघि सिगांपुर प्रस्थान गर्नुअघि नेपालले अन्तिम तयारीको रुपमा मलेसिया भ्रमण गरेको थियो । भ्रमण भित्र रहेर नेपालले मलेसियाबिरुद्द २ अन्तराष्टिय टी -ट्वान्टी खेल खेल्यो जसमा नेपालको तर्फबाट पारसले राम्रो गरेका थिए । जस अन्तर्गत पहिलो खेलमा ८६ रन र दोस्रो खेलमा २३ रनको योगदान गरेका थिए ।
तर यहाँ पनि दुई खेलमा २ परिवर्तन देखियो । जसको एक मात्र कारण थियो खेलाडीको प्रदर्शन पहिलो खेलमा प्रदिप एरिलाई पारससँगै ओपनिङमा पठाईयो तर उनले टिमको बिश्वाशमाथि खरो मात्र उत्रिएनन निकै निराशाजनक प्रदर्शन गर्नेक्रममा मात्र ८ रन बनाए ।
यसपछि टिमले फेरी प्रयोगमा भखरै अन्डर नाईण्टिन टिमलाई एसिया कपमा छनोट गराउँदा राम्रो प्रदर्शन गरेका पवन सरार्फलाई मौका दियो । उनले पनि राम्रो गर्न सकेनन मात्र १० रन बनाएर आउट हुँन पुगे ।
जसले गर्दा फेरी त्यही प्रश्न उब्जिएको छ । यसपटक ओपनिङ कसले गर्ला ? बारबार नेपालको कमजोर ओपनिङ पारीले नेपाललाई नयाँ नयाँ खोज जारी राख्न बाध्य बनाउछ ।
मलेसियाबिरुद्दको अन्तराष्टिय सिरिज अघि नेपालले अक्टोबरमा मलेसियामा भएको आईसीसी विश्वकप टी -ट्वान्टी पुर्बी क्षेत्रीय छनोटमा नेपालले पनि त्यही प्रयोगलाई निरन्तरता दिईरहेको थियो । जसअन्तर्गत प्रदिप एरि , बिनोद भण्डारी र अनिल कुमार शाहले ओपनिङगर्ने जिम्बेबारी पाएका थिए ।
तर यहाँ पनि यी खेलाडीबाट सन्तोषजनक भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा हालको दिन सम्म त्यही खोजमा नेपाल रहेको छ । म्यानमारबिरुद्दको पहिलो खेलमा नेपालका ओपनर प्रदिप एरि मात्र ६ रनमा आउट भएका थिए भने बिनोदले १ रन बनाए । त्यसबेलानै नेपाललाई ठुलो झट्का लागेको हुनुपर्छ । कमजोर म्यानमार त्यसमाथि मात्र ३० रनको लक्ष्य पछ्याँउदै जवाफी ब्याटिंङ गर्दा लागेको थियो नेपाललाई यी ओपनर ब्याट्सम्यानले जित दिलाउने छन । बिडम्बना त्यो हुँन सकेन र नेपालले दोस्रो मलेसियासँगको खेलमा अनिल र बिनोदलाई ओपनिङ जोडीको रुपमा मैदान उतार्यो ।
त्यसमा नेपाल यसपटक पनि चुक्न पुग्यो । अनिल मात्र १ रनमा आउट हुँन पुगे भने बिनोदले १२ रन बनाएर पभेलियन फर्किए भने तेस्रो खेल थाईल्याण्डसँग अनिलले २५ रन र बिनोदले १५ रन बनाएर आउट हूँन पुगे ।
भुटानबिरुद्दको चौथो खेलमा अनिलको ठाउँमा प्रदिपलाई मौका दिईयो । प्रदिपले राम्रो प्रदर्शन गर्ने गरे ६८ बलको सामना गरेका उनले ६ २ छक्काको मद्दतमा अविजित ७५ रनको पारी खेलेका थिए । भने विनोदले ६ रन बनाएका थिए सोहि प्रतियोगिताको चिनसँग भेटमा २७ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालका प्रदिपले ४ रन र विनोदको २४ रनको अविजित पारीले नेपाललाई शानदार जित दिलाएको थियो ।
फोटो सौजन्य : मलेसियन क्रीकेट
यी माथिका बिगतका उदारण हुँन जसलाई आज सम्म दिईरहनु हाम्रो बाध्यता हो । असफल पछि असफल हुँदा यसपटक कस्तो रहला त्यो आउँने दिनले प्रष्ट गर्नेछ । विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा छनोट हुँने लक्ष्य सहित सिगांपुरमा रहेको नेपाली टोलीले यसपटक यो कुरामा बिशेष ध्यान दिन जरुरी मात्रै छैन खेलाडीलाई पूर्ण बिश्वाश गर्न पनि जरुरी छ भने ओपनरले पनि टिमको विश्वासलाई न्याय दिनै पर्छ ।
हो खेलमा सदैभ एकै किसिमको हुँन सक्दैन कहिले काही राम्रो नहुँन सक्छ त्यो खेलको एउटा पाटो हो । तर खेलाडीको निरन्तरता हुँन जरुरी छ । त्यसमै नेपाल चुक्कै आएको छ बिगत देखि रहेको छ अर्को कुरा खेलाडी प्रति टिमको विश्वास पनि कम भएको हो कि भन्ने पनि बेला- बेलामा लाग्ने गर्छ ।
ओपनरलाई पछिल्लो समय ढुक्कको माहोल सिर्जना नहुनु पनि एक कारक त्त्त्ब हो । एक खेलमा असफल हुनु अर्को खेलमा ओपनिंङ् गुमाउनु परम्परा देखिदै आएको छ । जसले गर्दा खेलाडिको मनोबृतिमा केहि न केहि खेलिरहेको हुन्छ ।यो एक सोचनीय बिषय पक्कै हो ।
यता समर्थकहरुको पनि यहिँ अपेक्षा रहेको छ । यसपटकको छनोट प्रतियोगितामा नेपालले राम्रो गरोस जसमा ओपनरको पनि राम्रो भूमिका समेत रहोस । र होस् यस्तै……..
Previous Postविश्वकप छनोटमा आयोजक सिगांपुरको विजयी सुरुवात : नेपालको खेल भने भोलि
Next Postभोलिबाट नेपालको यात्रा सुरु : पहिलो खेलमा कमजोर कतारको सामना
भर्चुअल तेक्वान्दोलाई पूर्व खेलाडीको सहयोग
बेंगलोरसँग कोलकताको लज्जास्पद हार
राजस्थानमाथि बेंगलोरको रोमान्चक जित
कार्तिक १ २०७७, शनिबार